मृत्यु जितेर मात्रै यार्साबाट कमाई, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
त्रिपुराकोट, डोल्पा। यार्सागुम्बा संकलनका लागि जेठ १ देखि डोल्पाका सम्पूर्ण पाटन खुला गरिएसँगै सर्वसाधारण धमाधम इजाजतपत्र लिएर पाटन प्रवेश गर्न थालेका छन्। शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले हिजोबाट जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट इजाजतपत्र वितरण गरी यार्सागुम्बा टिप्नका लागि पाटन जान खुल्ला गरेको हो।
मध्यवर्ती क्षेत्र भित्रकालाई रु एक हजार, मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिर डोल्पा जिल्लाका सर्वसाधारणलाई रु दुई हजार ५०० र जिल्ला बाहिरकालाई रु तीन हजार ५०० रकम तोकिएको निकुञ्जले जनाएको छ।
डोल्पामा सयौँको संख्यामा रहेका यार्सागुम्बा पाटनमा दशौं हजार सर्वसाधारण वनस्पती र जीवको दुबै गुण पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बाको खोजीमा पुगिसकेका छन्। यार्सागुम्बा टिप्न गर्भवती, सुत्केरी महिला दूधेबालक च्यापेर पाटन पुगेका छन्।
डोल्पाली जनताको जीवनस्तरसँग जोडिएको यार्सागुम्बाको संकलनका लागि वर्षेनी दशौँ हजार सर्वसाधारण बन्दोबस्तीका सामानसहित डोल्पाका उच्च हिमाली यार्सागुम्बा पाटनमा पुग्ने गर्दछन्। प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि डोल्पामा यार्सागुम्बाको महाकुम्भ मेला शुरु भएको छ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ का लोकमान श्रेष्ठ पनि बन्दोबस्तीका सामानसहित भाङ्का पाटनमा यार्सागुम्बा टिप्न पुगिसकेका छन्। साना बच्चाबच्चीलाई कुरुवाको भरमा घरमै छाडेर पाटन हिँडेका श्रेष्ठ यसवर्ष एक महिने अवधिमा दुई लाख रुपैयाँसम्म कमाउने लक्ष्य रहेको बताउँछन्।
त्यस्तै त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाकै जमानसिंह कठायत पनि विगत वर्षमा जस्तै यसपटक पनि यार्सागुम्बा टिपेर राम्रो आम्दानी गर्ने शुरमा छन्। पाटनमा पुगेर यार्सागुम्बा टिप्ने आफू एक्लैले दुई लाख रुपैयाँसम्म कमाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
यार्सागुम्बाबाट धेरैले राम्रो आम्दानी गर्न सकेपनि कतिपयले भने उल्टो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्दछ। यार्सागुम्बा टिप्ने समयमा पचासौँ हजारका उधारो सामान लिएर पाटन पुग्छन् भनेजति यार्सागुम्बा नपाएपछि घरको अन्य आम्दानीबाट उधारो रकम चुक्ता गर्नुपर्दछ। त्यसो त यार्साको कमाइको साटो साहुसँग ऋण काढेर व्यापारीको उधारो चुक्ता गर्दा ऋणबाट माथि उठ्न नसकेका थुप्रै उदाहारण छन्।
यार्सारुपी सुन खोज्नु डोल्पालीको रहर नभई नियति नै हो। वर्षभरिको कमाइ गर्न हिमाली भेगमा पुग्नु उनीहरुको रोजगारी हो। त्यसो त यार्सागुम्बा टिपेर मनग्य आम्दानी गर्नका लागि गाउँबस्ती नै सुनसान पारेर डोल्पावासी यार्सागुम्बा पाटनको यात्रा तय गरिसकेका छन्। यहाँका करेलीकाँडा, पहाडा, सुँ, ल्हा, माझफाल, रह, तल्लो डोल्पाका कालिका, नर्कु, इल, उपल्लो डोल्पाका साल्दाङ, भिजेर, मुकोट, फोक्सुन्डोलगायतका वस्ती सुनसान छन्।
पशु चौपायासहित दूधेबालक, सुत्केरीसहित पाटनतिर गएपछि यहाँका बस्ती सुनसान बन्दै गएको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ का स्थानीय नैनानन्द देवकोटाले बताए। गाउँघरमा वृद्धवृद्धाबाहेक अरु कोही नभेटिने गरेपछि काम गर्ने मान्छे नपाउँदा जेठबाट शुरु हुने धान रोपाइँ गर्नसमेत समस्या हुने गरेको देवकोटाले बताए।
प्रतिगोटा रु ५०० देखि १५ सयसम्म पर्ने यार्सागुम्बा समयको प्रभाव छिमेकी जिल्ला रुकुम, जाजरकोटमा पनि धेरै पर्ने गर्दछ। यार्सागुम्बा समयमा रुकुम जाजरकोटवासी समेत घरमा ताला लगाएर परिवारसहित यार्सागुम्बा खोज्न डोल्पा पुग्छन्।
यार्सागुम्बा संकलन गर्नु सोचेजति सहज छैन्। हिमालका उच्च भू–भागसम्म पुग्नु मृत्युलाई जिते सरह हो। चार हजार मिटरभन्दा धेरै उचाइ भएका हिमाली पाटनमा मात्र पाइने यार्सागुम्बा संकलन गर्नु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण कार्य हो। वर्षेनी थुप्रै सर्वसाधारणको चिसो र लेक लागेर मृत्यु हुनेगर्दछ।
यार्सागुम्बा पाइने हिमाली पाटनसम्म पुग्न अप्ठेरा र अनकन्टार भिरका बाटा पार गर्नुपर्दछ । यार्सागुम्बा पाटन पुगिसकेपछि पनि भारी हिमपात, वर्षाकाबीच पनि दिनभर घुँडा धसेर खोज्नुपर्ने हुँदा अत्याधिक चिसोका कारण धेरैजना बिरामी पर्ने र कतिपयको त निधनसमेत हुने गरेको त्रिपुरासुन्दरी–१ का कालुप्रसाद हमालले बताए।
बहूमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा संकलन गर्ने समय शुरु भएलगत्तै डोल्पाका अधिकांश विद्यालय बन्द भएका छन्। विद्यार्थी मात्र नभई शिक्षक पनि यार्सा टिप्न पाटनतर्फ जाने भएकाले डोल्पाका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द हुने गर्दछन्।
त्यस्तै यार्सागुम्बा संकलनको समय शुरु भएसँगै जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा सेवाग्राहीको चाँप घटेको छ। सर्वसाधारण सबै यार्सागुम्बा टिप्न पाटन गएपछि सेवाग्राहीको चाप घटेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत भीम धरलाले बताए।
यतिबेला मुख्य बजार समेत सुनसान बन्दै गएका छन् भने यार्सागुम्बा पाइने सयौँ पाटन भने रंगीचंगी पालले रंगिएका छन्।
यार्सागुम्बा संकलनको समयलाई व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण बनाउन तीनवटै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको छ। विगतका वर्षमा जस्तै यसवर्ष पनि सुर्खेतबाट ७५ जनाको संख्यामा सशस्त्र प्रहरी डोल्पा आइपुगेको छ।
त्यस्तै १५० भन्दा धेरै प्रहरी परिचालन गरिएको जिप्रका डोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिप्रसाद शर्माले बताए। निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेना पनि तोइजुम, छेप्का, सुन्दरलगायतका पोष्टमा सेना बसिरहेको शे–फोक्सुन्डो निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरीले बताए।
यार्सागुम्बा सिजन अवधिभर हुने हत्या, हिंसा, लुटपाट,चोरी डकैटीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचारलन गरिएको बताइएको छ। यतिखेर यार्सागुम्बाको कारोबारका लागि करोडौँ रुपैयाँ बोकेर व्यापारी डोल्पा भित्रने गर्दछन्। जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर राख्दै त्रिपुराकोट, कालागौँडालगायतका नाकामा प्रहरीले विशेष सर्तकता अपनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। रासस